Makwiriro andakazoita ndanwa kaPiritsi! – VanodaZvinhu
Babe rangu all the time raingogara richicomplainer kuti ndokurumidza kutunda. So I had been boring since patakatanga kudanana, becoz I was not satisfying her on bed pamwe pacho ndaitokurumidza kutunda asati atomboti kudi but aitozochancer pa2nd round.
So chinzwa ka yakazotambika last Sunday 18 July. I woke in the morning preparing to go to church, but ndainzwa kuda bonde so ndakambozama kuudza bbe rangu kuti tiregere kuenda kuchrch kuti timboswera tose padheni pangu. Chainyanyo netsa raiziva kuti obvious mukomana wangu kuda kundikwira chete but asinganyatsonditundisa. So rakaramba rikati I have to go church becoz I know wat u want but haupedzi kuita zvinhu zvacho like Sunday we spend five hours tose but hauna chawakaita. Kungondinyemudza nemboro, etc etc…ha ndakabva ndaramwa ndikaenda kuchrch. Ndichisvika kuchrch bbe rikati ndave kumba ndikati am in church handiti waramba here ndobva rapedzisira rauyawo kuchurch.
Ndapedza ndakati huuuuuu, kufemereka. Ndakazomurova yechi2 yaaifungidzira kuti ndeyechi2 iyo iriyo ye3. Ndakamukwira zvemhando yepamusoro. Akanyorovedza machira angu zvaasati amboita since pandakamuvhura. Tapedza ndakamuperekedza so chakundinetsa chinhu 1 akunditi arikufungidzira kuti anenhumbu ini ndirikungozvishingisa ndichiti I will take u bbe but handisati ndave ready so zuva rake remaperiods iSaturday so ma1 although ndakamusertisfyer@last.
by DrSviro · Published June 9, 2015